श्री एयरलाइन्स थपिँदा हवाई यात्रुका लागि के फरक? भाडा मात्र होइन उडान रणनीतिनै बदलिन सक्छ :: BIZMANDU
श्री एयरलाइन्स थपिँदा हवाई यात्रुका लागि के फरक? भाडा मात्र होइन उडान रणनीतिनै बदलिन सक्छ
प्रकाशित मिति: Aug 11, 2017 7:51 AM
काठमाडौं । झन्डै चार महिनाको रस्साकस्सीपछि श्री एयरलाइन्सले फिक्स विङ्ग (नियमित उडान) अनुमति पाएसँगै ट्रङ्क रुट (धेरै यात्रु उडान गर्ने गन्तव्य) मा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
बुद्ध र यति एयरलाइन्ससँग आफ्नै ढंगले प्रतिस्पर्धा गरि रहेको सौर्य एयरलाइन्सलाई पहिलो उपस्थितीमै उछिन्ने रणनीति श्रीले बनाएको छ। श्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नभन्दा सकेसम्म उसको उडानलाई विलम्ब गराउन केही 'प्लेयर' नै लागे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप पछि अन्ततः श्रीलाई उडान अनुमति (एओसी) दिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बाध्य भयो।
एटै पटक तीन वटा क्यानेडियन कम्पनी बम्बार्डियरले उत्पादन गरेका सिआरजे सिरिजका जहाज ल्याएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको श्रीका प्रवन्ध निर्देशक सुधीर मित्तलले आफ्नो उपस्थितीको पहिलो असर भाडामा पर्ने र यसले उपभोक्तालार्इनै फाइदा हुने बताए। श्रीले ५० सिट क्षमताको सिआरजे २०० दुईवटा र ७८ सिटको सिआरजे ७०० एउटा ल्याएको छ।
दुबै सिरिजका जहाजको सिट क्षमता यतिका हाल उडानमा रहेका जहाज भन्दा धेरै छ। यतिसँग हाल ३० सिट क्षमताका सात वटा जेटस्ट्रिम ४१ ट्विन टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट छन्। बुद्धसँग दुई वटा बिच १९०० डी, तीनवटा एटिआर ४२ र चारवटा एटिआर ७२ जहाज छन्। यति पनि एटिआर जहाज भित्र्याउने तरखरमा छ।
संचालनमा रहेका केही एयरलाइन्स कम्पनीलेनै श्रीको एओसी रोक्न प्रयास गरे तर सकेनन्। चार महिनापछि एओसी पाएको श्रीको प्रवेशले नेपाली हवार्इ आकाशमा नयाँ प्रतिस्पर्धा ल्याउँदैछ। एओसी लम्ब्याएर प्रतिस्पर्धा रोक्न खोज्ने कम्पनीनै उडान थालेपछि श्री एयरलाइन्सको पहिलो 'शिकार' बन्न सक्ने नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्।
तीन बर्ष अघि सञ्चालनमा आएको सौर्य एयरलाइन्सले लामो समय एउटा जहाज मार्फत मात्रै उडान गरेको थियो। तीन महिना अघि मात्रै कम्पनीले बम्बार्डियरको सिआरजे २०० सिरिजकै एउटा जहाज थप्यो। दशैं अगावै अर्को जहाज पनि ल्याउने कम्पनीले जनाइसकेको छ। नेपाल वायु सेवा निगम पनि दुई चिनियाँ जहाज मार्फत आन्तरिक उडानमा प्रतिश्पर्धा गरि रहेको छ। आउँदो दशैं तिहार सिजन स्वदेशी बायु सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि महत्वपुर्ण प्रतिस्पर्धाको याम हुनेछ।
कम्पनीहरुबीचको प्राइसवारले उपभोक्तालाई त फाइदा नै हुनेछ। तर, सम्हालिन नसक्ने कम्पनीका लागि त्यो घातक हुनसक्छ। विगतमा पनि प्रतिस्पर्धाले केही कम्पनीहरु आर्थिक संकटका कारण बन्द समेत भए। प्राइस वारकै कारण दशक अघि कस्मिक एयर बन्द भएको थियो। दशक बढी हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गरेको अनुभव सहित श्री व्यवस्थापन फिक्स विङ्गमा आएको हो। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुधीर आफुलाई यो क्षेत्रमा लामो रेशको घोडा सावित गर्न चाहन्छन्। बुवा बनबरीलाल मित्तलले श्री हेलिकप्टर सेवा सुरु गर्दा उनी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को जागिरे थिए। १०० हाराहारी मुलुकमा व्यवसायीक लगानी गरे पछि बुवाको बिजनेश सम्हाल्न उनी नेपाल फर्किए र फिक्स विङ्गको सपना देखे।
सुरुवाती प्रकृया सबै फटाफट अघि बढ्यो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज ल्याउने अनुमति समेत दियो। तर, जब विमान काठमाडौँ उत्रिए, उडान अनुमति लिन लामै पापड पेल्नु पर्यो। झन्डै चार महिना जहाजको पार्किङ फि तिर्दै कर्मचारीलाई कामबिनै तलव दिएर पाले उनले।
कहिले यता र कहिले उता धाउँदा धाउँदा आजित मित्तल बेलाबेला निराश पनि सुनिन्थे। तर, उनले हिम्मत हारेनन्। अन्ततः बिहीबार उनको प्रतिक्षा सकिएको छ र आजैबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
शुक्रबार पहिलो व्यावसायिक उडानको रुपमा श्रीका जहाज भैरहवा र नेपालगञ्ज जाँदैछन्। हवाई सेवा कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले यात्रुलाई मूल्यमा मात्र होइन अरु फरक फाइदा पनि हुने देखिएको छ। श्रीले काठमाडौँबाट बिहान मात्रै पहिलो उडान थाल्ने प्रणाली बदल्ने योजना बनाइ सकेको छ। राजधानी बाहिरका एयरपोर्टमा बास बस्ने र बिहान त्यताका यात्रु लिएर काठमाडौँ भित्रिने कम्पनीको रणनीति छ।
बुद्धले पनि यसअघिनै भरतपुर-पोखरा-भरतपुर उडानको योजना सार्वजनिक गरि सकेको छ। राजधानी बाहिरका दुईवटा महत्वपुर्ण व्यावसायिक गन्तव्य पहिलो पटक 'हवाइ कनेक्टेड' हुन लागेका हुन्। राजधानी जोड्ने रुटमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा भोली बाहिरका अन्य गन्तव्यमा पनि यस्ता उडान थालनी भए यात्रुले थप सहजता पाउनेछन्। यस्ता फरक सोचले नेपाली आकाशको परम्परागत प्रतिस्पर्धाको संरचना नै बदल्न पनि सक्छ।
श्री एयरलाइन्स थपिँदा हवाई यात्रुका लागि के फरक? भाडा मात्र होइन उडान रणनीतिनै बदलिन सक्छ को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Diwakar[ Aug 11, 2017 - 10:55 am ]
Good for passenger.